Best 24 Chest Tattoos Design Mazano Kune Varume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Chest Tattoos Design Pfungwa Yevarume nevakadzi
sonitattoo July 12, 2016
Kana iwe uri tattoo aficionados uye kuvhiringidzika, pane zviuru zvebhokisi maumbirwo ayo iwe unogona kuyanana nawo.
Kushandiswa kwe # tattoos tattoos kwakava izvo zvatinoona kune vamwe vanodhakwa nekuda kwesimba uye kushamisa kwaro kune muviri. image source
Izvi #tatosos zvinogona kuva zvakanaka, zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinotyisa. Zvose zvinoenderana nezvamunoda kubudirira mushure mekutora kwako. image source
Chifukidzo chechipfuva chiri mumhepo. Idzi yega inogona kuva imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzemattoo dzaunogona kuwana kupi zvako munyika. image source
Iwe unogona kunge uchida kuziva kuti chifu chepamusoro chinzvimbo chei kana zvasvika pakukora tattoo. Varume vacho vanogona kutaura kuti chifuyo chinobva kune chikamu chiri pedyo nemutsipa, isu tiri kutaura pamusoro pezvinyorwa zvitsvuku kusvika pasi pectoral muscles. Izvi ndizvo izvo varume vanogona kutsanangura sechifuva chavo. image source
Vakadzi vanogona kutaura kuti mazamu acho haabatanidzi muchipfuva chavo. Izvi hazvirevi kuti iwe unogona kutadza kunyora zviratidzo pamusoro pezviitiko izvi. image source
Kana zvasvika kune zvekugadzirwa kweganda, hakuna chinhu chisingazoendi. Iwe unofanirwa kuziva kuti imwe yemafungiro asina kururama anowanikwa kana iwe uchitaura nezvechifukidzo chechipfuva ndechokuti kukoka hakunzwisisiki. image source
Chikonzero chavanofunga nemutsara uyu ndechokuti vanokanganisa vanotenda kuti nzvimbo dzepectorals dziri varume uye nemazamu munzvimbo dzevakadzi ndiyo apo mabhokisi anowanikwa. image source
Tichakutaurira kuti bony rakanaka rinogona kutaurwa kuti chikamu chebhokisi. Usati wasarudza kusarudza chifukidzo chako, edza uye uone kuti uri kusarudza chigadzirwa chichave chakanaka neprotuberances inowanikwa pachifuva uye mavheko emhuka zvakare. image source
Usatarira mifananidzo pa internet. Zvinotoshamisa kuti mafupa emapfupa aya anoratidzwa paIndaneti achave akasiyana kwazvo mumuviri wako. image source
Chifukidzo chechipfuva chave chiripo zvisati zvave 20th zana remakore. Paunenge uchishandisa chifukidzo chechipfuva, iva nechokwadi chokuti une chimiro chakakwana icho chichataurira nyaya yako. image source
Vanhu vazhinji vanochera chifukidzo chechipfuva vari kutaura kuti vane chimiro chakadai kana kuti zvinorehwa nechiratidzo ichocho kumwoyo yavo. Tichakuudza nguva dzose kuti chinhu chakanakisisa chaunogona kuita usati waenda kutora mifananidzo ndeyokuita tsvakurudzo yako kutanga. image source
Chifukidzo chechipfuva chave chiri chinhu chiri mumamiriro ose munzvimbo iyo ndiyo chikonzero nei tichiona ichikwevedza nzira dzakasiyana uye kugadzirwa kunogona kuonekwa kana iwe une mufananidzo wakanaka wekudhirodza. Tarisa uhu hwechifukidzo chechifu uye utitaurire kuti unofadza. image source
Inki yekfupa yekfuti inogona kuinwa pane chero chikamu chemuviri. Dzimwe nguva, tinoona zvifukidzo zvechifukidzo zvinotarisa zvinoshamisa. Kutenda kumarudzi akasiyana-siyana ehutano hwevanyori vemattoo pasi rose. Iwe haugoni kuona tattoo yechifukidzo uye hauna kutarisa wechipiri. image source
Zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti shiri ye tattoo design yakave yakakosha. Iwe unofanirwa kutora nguva yedu mukutsvaga kuburikidza nekambani yekuInternet ye shiri kusati wasarudza chisarudzo chako. Nguva yokutanga yaunofanirwa kuita ndeyokunyora mucherechedzo uyo achakuudza zvazviri. image source
Kune marudzi akasiyana eeshiri; shiri dzakasikwa uye dzomusango dzemarudzi ese uye mashizha. Nyeredzi imwe neimwe inofanirwa kukosha iyo ndiyo chikonzero nei tichifanira kungwarira rudzi rwemhando yechiratidzo yatinozoshandisa. Tora somuenzaniso, chikwata kana gunguvo rave richibatanidzwa nemashiripiti uye uroyi apo majiji machena anozivikanwa kuti anofananidzira rugare nekuchena. image source
Nzira iri nyore yekupindura mubvunzo uyu ndeyekutarisa tattoo iwe uri kutsvaga. Chifukidzo chechifu chinomiririra madzimambo munzvimbo dzakawanda. Nhasi, chiitiko chechifukidzo chechifu chiri kukura uye pane zvimwe zvikonzero nei uchifanira kuwana imwe iwe pachako. image source
Zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti chifukidzo chechikwata chekugadzira chave chakakosha. Iwe unofanirwa kutora nguva yedu mukutsvaga kuburikidza nekambani yekutsvaga kwebhokisi pamapfupa usati wasarudza chisarudzo chako. image source
Chimbofungidzira, chifukidzo chechifukidzo hachina kutaridzika kuoma. Nebasa rakanaka rekumba pane kupi kwaunogona kuitora, iwe une chokwadi kuti une imwe yakafanana neizvi. image source
Murume wechifupa chifukidzo haazoendi nokukurumidza. Bhokisi remurume rinogona kutorwa kuti rienderane nemunhu uye nekuti rakadzika uye rakafara, mifananidzo yakawanda inogona kuitwa pano. image source
Unofarira izvi here? Nguva yokutanga yaunofanirwa kuita ndeyokunyora mucherechedzo uyo achakuudza zvazviri. image source
Mukutora tattoo seizvi, tora nguva uye mubvunze mibvunzo uye uzive kuti unoda kupi kune imwe yakafanana. image source
Dzvanya pano kuti uwane mamwe Chest Tattoo Designs
Geometric Tattoosshumba tattoohanzvadzi tattoosAnkle Tattoosfoot tattoostattoos for girlskorona tattooslotus flower tattootattoo ideastattoos kuvanhuback tattooseagle tattoosrose tattoosAnchor tattoosinfinity tattookoi fish tattoocompass tattooelephant tattooarrow tattoozuva tattoosFeather Tattooscorpion tattoomehndi designzodiac zviratidzo zviratidzocat tattoosbutterfly tattooscross tattoosbirds tattooscherry blossom tattoowatercolor tattoocouple tattoosangel tattoosrip tattooscute tattoosdiamond tattootribal tattoosflower tattoosrudo tattooschifuva tattooshenna tattootattoo yezisomaoko tattoosneck tattoosmimhanzi tattoosoctopus tattoosleeve tattoosarm tattoosshamwari yakanakisisa tattoosHeart Tattoosmwedzi tattoos